Boqortooyada Sacudi Carabiya Ayaa Xabsiga Dhigtey 11 Amiir – STAR FM SOMALIA
Dowladda Sucuudi Carabiya ayaa xabsiga dhigtey 11 amiir kadib markii ay diideen inay bixiyaan qarashaadka korontada iyo biyaha ay isticmaalaan.
Hase yeeshee Amiiradan ayaa la sheegay in ay dalbadeen in magdhaw laga siiyo wiil ay ilma adeer yihiin oo la dilay laba sano ka hor.
Markii ay diideen inay qasriga madaxtooyada ka baxaanna waa la xiray oo hadda waxay sugayeen maxkamad.
Xeer-Ilaaliyaha Guud ee Sacuudiga ayaa sheegay in qof walba ay tahay in lala xisaabtamo iyadoon la eegayn xilka uu hayo. In lagu xiray xabsi si weyn loo ilaalinayo ayaa waxay wax badan ka duwan tahay habka loola dhaqmay ku dhawaad laba boqol oo amiir.
Saraakiil sarsare oo Dowladda ka tirsan iyo ganacsato ayaa bishii Novembar ee la soo dhaafay lagu xiray hotel lagu raaxaysto Arrintaas oo qeyb ka ah waxa loo soo bandhigay inay tahay olole ka dhan ah musuqmaasuqa
Wareysi: Isbitaalka degmada Warsheekh
Dadka deggan magaalada Warsheekh iyo tuulooyinka hoostaga ayaa waxa ay u egtahay in ay ka baxayaan baahiyaha ay u qabeen adeegyada caafimaadka, kadib markii ay magaalada yeelatay Isbitaal guud.
Tobaneeyo qof ayaa todobaadkii taga dhakhtarka, si’ ay u helaan baaris ama daweyn bilaash ah. Waxaa kale oo ay haweenka deegaanka ka gudbeen dhibaatooyinkii xilliga Uurka, Umusha iyo Dhalmada kadib, maadaama ay hawlwadeenno xirfadyahanno ah ay ka shaqeynayaan.
Isbitaalka ayaa waxaa hirgeliyay oo qarashka hawlaha uu qabto ka bixiya dalladda ururada Warmocad oo ah hay’ad ay leeyihiin jaaliyadda deegaanka.
Dr. Zakariye Meyre, oo ah isu-duwaha caafimaadka magaalada Warsheekh iyo agaasimaha guud ee isbitaalka magaaladaasi ayaan ka wareysannay hawlaha ay hayaan iyo duruufaha ku xeeran.
Waxa uu u warramay Abubakar Maxamed Cali.
TABINTA IYO SOOSAARIDDA BARNAMIJKA (CALI MAXAMED CALI )